५ पाण्डवलाई द्रोपदीले कसरी एकसाथ “शारीरिक सुख” प्राप्ति गराउथिन् !:: Naya Nepal
काठमाडौ । हिन्दुहरुको पवित्र ग्रन्थमा केही अत्यन्तै रोचक, अनौठा र सोचनीय विषयहरु छन् । त्रेता युगको सत्य घटना भनेर विश्वास गरिएको महाभारतका केही विषय थाहा पाउँदा जो कोहि चकित हुने गर्दछन् । महाभारत हिन्दू धर्मको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ मानिन्छ । योबाट नै मानव आँचरण सिकाइएको छ ।
महाभारतमा सिर्फ कौरव र पाण्डवको लडाई मात्र प्रसिद्ध छैन । महाभारत अनेकौँ रहस्यले भरिएका तथ्यहरुपनि छन् । जुन बारेमा मानिस जान्न अत्यन्तै इच्छुक छन् । एउटा यस्तो रहस्य छ । पाँच पाण्डवकी एक पत्नी थिइन् द्रोपदी । जबसम्मकी हिन्दु परम्परामा भाउजु आमा समान र बुहारी लक्ष्मी समान मानिन्छ । जसलाई गलत नजरले हेर्न नै बन्देज गरेको छ । तर महाभारतमा पाँच दाजुभाई की एक श्रीमती उल्लेख गरिएको छ ।
अब ती पाँच दाजुभाई की एक श्रीमतीसँग “शारीरिक सुख” प्राप्ति कसरी हुन्थ्यो छ ? अधिक पाठकको चासोको विषय यहाँ पेश गर्दैछौ । सुन्दा अनौठो । रोचक तर सत्य विषयलाई महाभारतको गहिरो अध्ययनपछि यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेका हौँ । यो महाभारतको खण्डले कतिपय अवस्थामा हिन्दु धर्मलाई विवादिपनि बनाएको छ । भाउजु बुहारीसँग “शारीरिक सुख” खोज्ने हिन्दुहरु भन्दै आरोप लगाउँने गरेकोपनि पाइन्छ । तर यो भित्रको खास कुरा आज हामी बताउँदैछौ ।
द्रौपदीको उत्पत्ति (जन्म) राजा द्रुपदको हवन कुण्डबाट भएको हो । हवन गरिरहेको कुण्टबाट पुत्री प्राप्ति भइन् । द्रोणाचार्यको अन्त्यका लागि पुत्र प्राप्तिको उदेश्यले राजा द्रुपदले यो यज्ञ गरिरहेका थिए । तर पुत्री भइन् । पुत्रीको नाम द्रौपदी राखियो । तर पुत्री यति छिटो हुर्किन् की पूर्ण चन्द्र आकार जस्तो शरीर बनिसकिन् ।
अब छोरीको बिबाहका बारेमा राजालाई चिन्ता हुन थाल्यो । राजा द्रुपदले आफ्नी पुत्री द्रौपदीको बिबाहका लागि स्वयंवर गराइरहेका थिए । राजाले राखेका पुरा शर्त पुरा गरेर योग्य बरको रुपमा प्रमाणित भएर पञ्चपाण्डका अर्जुन स्वयम्वर गरिरहेका थिए । सबै शर्त पूरा गरेर अर्जुनले द्रौपदीलाई आफ्नी पत्नी बनाए । अर्जुनले त्यो समय द्रौपदीको आफ्नी पत्नी बनाएका थिए । त्यो समय पाँच पाण्डव भाई आफ्नो पहिचान लुकाएर माता कुन्तीका साथ ब्राह्मण वेषमा बसिरहेका थिए ।
उनीहरुको दिनचार्य भनेको भिक्षा माग्दै हिँड्नु थियो । यसरी नै जीवन यापन गरिरहेका थिए । त्यसैले सबै पाण्डवहरु भिक्षा माग्न गएका थिए । त्यही बेला अर्जुनले राजा द्रौपदको शर्त पुरा गरेर उनकी छोरी द्रौपदी श्रीमती बनाएर घर लिएर आएका थिए । जब अर्जुन पत्नी द्रौपदी लिएर आफ्नो घर मा पुगे । उनी ढोकामा नै उभिएर माता कुन्तीलाई सरप्राईज दिन्छु भन्ने उदेश्यले आमालाई झुक्याउने गरी प्रश्न गर्छन् ।